बैठक - अमेरिकी उत्पादकत्वको मृत्यु | Martech Zone
मंगलवार, मार्च 23, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मिटि meetings्गहरू किन दुखाइ दिन्छ? तपाईं सभाहरूलाई फलदायी बनाउन कस्ता कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ? मैले ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन कोशिश गरें बैठकमा हास्यपूर्ण (यद्यपि इमान्दार) प्रस्तुतीकरणमा।
मैले प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतीकरणको यो विस्तारित दृश्य हो। यस प्रस्तुति सभाहरूमा एक समय को लागी आएको छ, मैले लेखेको छु बैठकहरूको बारेमा र विगतमा उत्पादकता। म एक टन बैठकहरूमा भाग लिएको छु, र ती मध्ये धेरैले समयको भयानक बर्बाद गरेको छ।
जब मैले आफ्नो व्यवसाय शुरू गरें, मैले भेट्टाएँ कि मैले मेरो तालिका बाहिर सभाबाट बाहिर निकाल्न धेरै समय दिएँ। म अब धेरै धेरै अनुशासित छु। यदि मसँग काम गर्ने वा परियोजनाहरू छन् भने, म रद्द गर्न र बैठकहरू पुनः शेड्यूल गर्न सुरू गर्दछु। यदि तपाईं अन्य कम्पनीहरूको लागि परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको समय तपाईंसँग छ। बैठकहरू प्रायः कुनै पनि अन्य गतिविधिहरू भन्दा चाँडो खान सक्छ।
अर्थव्यवस्थामा जहाँ उत्पादकता बढ्नुपर्दछ र स्रोतहरू घट्दै छन्, तपाईं दुबै सुधार गर्ने अवसरहरू फेला पार्न बैठकहरूलाई नियालेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
म हालै पढ्ने क्रममा छु र यी पुस्तकहरू मेरो व्यवसाय र मेरो व्यक्तिगत उत्पादकत्वको सम्बन्धमा मेरो लागि साँच्चै प्रेरणादायक भएको छ - सेठ गोडिनको लिन्चपिन: के तपाई अपरिहार्य हुनुहुन्छ?, जेसन फ्राइड र डेभिड Heinemeier ह्यान्सनको Rework र टिम फेरिस ' -घण्टा workweek। प्रत्येक पुस्तक ती बैठकहरु मा tackles।
टैग: बैठकको मृत्युसभाहरूमाउत्पादकता
मार्स 24, 2010 मा 11: 23 एएम
राम्रो प्रस्तुति डगलस, साझा को लागी धन्यवाद!
म भर्खरै गोडिनको नयाँ पुस्तकमा गएको छु र Startups.com मा Linchpin बारे एउटा रोचक कुराकानी फेला पारेको छु। तपाईं यसलाई यहाँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ http://bit.ly/b219d6
मार्स 24, 2010 मा 11: 44 एएम
बैठकहरू योजना बैठकहरू। कुनै पनि कर्पोरेट संस्थाको मृत्यु भनेको व्यक्तिगत प्रतिभा र क्षमताको सामूहिक खरीद-इन र निम्नतम सामान्य भाजकसँग सम्झौताको प्रतिस्थापन हो। डगले यहाँ भन्नु पर्ने धेरै कुरासँग म सहमत छु।
राम्रो तनाव = स्वस्थ तनाव। मलाई सामूहिक खरीद-इन बिना नै केहि उत्पादन गरेको बैठकहरूमा जान मन पर्छ। यसलाई "अवधारणाको प्रमाण" भन्नुहोस् र तपाइँ लगभग सधैं कार्यकारी खरीद-इन सुनिश्चित हुनुहुन्छ। यसलाई प्रयास गर्नुहोस्: यो रचनात्मक छ, यो सक्रिय छ, र यसले मानिसहरूलाई फरक सोच्न चुनौती दिन्छ।